ASUS Pro သည်မည်သူမျှလစျြလြူရှု့မထားသည့်လက်ပ်တော့ပ် | Gadget သတင်း
John Louis Groves | | လက်တော့ပ်
အားလုံးမဟုတ်သတင်း ကို CES 2017 သူတို့ဟာရက်သတ္တပတ်များစွာကြော်ငြာထားတဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေကိုဖြတ်သန်းလာတယ်။ ၎င်းထဲမှတစ်ခုမှာမြင်ကွင်းပေါ်တွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ASUS မှဖန်တီးပြီးအဖြစ်နှစ်ခြင်းခံသည့်လက်ပ်တော့အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ASUS Pro ကို B9440 ၎င်းသည်မကြာမီဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အတူတူ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြင့်ဖြန့်ဝေထားသောဓါတ်ပုံများတွင်သင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အလွန်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းအတွက်ထင်ရှားသည်။
များအတွက်တာဝန်ရှိသူများကကြေငြာခဲ့သည် ASUS ကကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်သေးငယ်သော ၁၄ လက်မ laptop တစ်လုံးနှင့်တစ်ကီလိုဂရမ်ကျော်သာအလင်းအားလုံးအထက်တွင်အထူးပြောနေသည်။ Full HD resolution နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတို့ပါဝင်သည့်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည့် laptop တစ်လုံးအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များမှာသေချာသည်။
ASUS Pro B9940 ကိုမေလ ၂၀၁၇ မှာရနိုင်ပါတယ်။
ASUS Pro ၏အမည်အောက်တွင်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မျဉ်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လက်ပ်တော့ပ်အသစ်တစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မှာကျနော်တို့ဒီအကွာအဝေးပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူစျေးကွက်ထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုငါတို့ရှာပါ core i7 သတ္တမမျိုးဆက်, 16 GB RAM အထိရှိသည် y သင်၏ SSD hard drive အတွက် 512 GB။ ASUS ၏အဆိုအရဤအရာအားလုံးနှင့်အတူဘက်ထရီကိုတပ်ဆင်နိုင်သည့်ဘက်ထရီတပ်ဆင်ရန်နေရာရှိနေသေးသည် ၁၀ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်.
ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပြန်သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရဤလက်ပ်တော့အသစ်သည်အဖုံးတစ်ခုတပ်ဆင်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည် magnesioတစ်ပင်အတွက်အခန်းရှိရာ splash- ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ကီးဘုတ် လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်စက်ပစ္စည်းအားကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းအတွက်လုံခြုံရေးအဆင့်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်များစွာတန်ဖိုးထားမည်ဖြစ်သည်။
ASUS Pro အမည်ရှိသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်သာသိသော်လည်း ASUS ကိုယ်တိုင်အရယခုနှစ်မေလ မှစတင်၍ စျေးကွက်၌ရရှိနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ $ 999 စတင်စျေးနှုန်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ကွန်ပြူတာများ » လက်တော့ပ် » ASUS Pro သည်မည်သူမျှလစျြလြူရှုမထားသည့်လက်ပ်တော့ပ်တစ်လုံးဖြစ်သည်
Asus Zenfone3Zoom ဟာတရားဝင်ဖြစ်ပြီးတော့သင့်ကိုလျစ်လျူရှုမှာမဟုတ်ပါဘူး
Toshiba က Portege X2W ဟုခေါ်သော 1-in-20 အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်